Utshintsho lokushisa okusezantsi kumfazi unokumisela ekuqaleni kokukhulelwa. Ukwanda kwindleko yokushisa kwe-basal yimiqondiso yokuba ukukhulelwa kwenzeka.
Eli bushushu lilinganiselwa ngumfazi kwimeko yokuphumla kwi-rectum. Izalathisi zalo zibonisa ukungabikho okanye ukuvela kwe-ovulation. Ukushisa okusemgangathweni kumjikelezo oqhelekileyo wokuya esikhathini kuhamba ngama-37 degrees, de kube kuqhutywe i-ovulation ngaphambi kokuphakathi komjikelezo. Eli xesha lalibizwa ngokuba yisigaba sokuqala. Xa iqondo lokushisa landa ubuncinane ubuncinane be-0.4 degrees, lithetha ukuba i-ovulation yenzeke. Kwinqanaba lesi-2, ukushisa okuphakamileyo kuqhubeka. Kwaye iintsuku ezi-2 ngaphambi kokuqala komjikelezo wenyanga, kwakhona uyahla. Ukuba akukho ukuhla kwezinga lokushisa kwe-basal kwaye akukho zanyanga zonke, ukuza kukhulelwa.
Kutheni umfazi efuna oku?
Oku kuyimfuneko ukuze kuchongwe ixesha lokukhulelwa liza kuba lihle. Ukulandelela iqondo lokushisa kwandisa amathuba okuba bafazi bafumane ukuba iqanda livuthiwe. Ukuncedisa ukukhulelwa kuya kuba yimini ngexesha kunye neveki ye-ovulation.
Ngokutsho kwegrafu yamaqondo obushushu, unokuvavanya umsebenzi kunye nemeko yenkqubo ye-endocrine kwaye unqume umhla wokuya esikhathini esizayo. Ngezibonakaliso zokushisa okusemgangathweni, umfazi unokumisela ukukhulelwa okwenzekile. Ngokuqinisekileyo, kufuneka ubeke iliso kwimiqondiso yayo imihla ngemihla kwaye ugcine idayari iintsuku eziliqela.
Indlela yokulinganisela ukushisa kwe-basal?
Ukushisa komzimba kuthintela uxinzelelo, umsebenzi owenziwe ngokomzimba, ukutyisa, ukutya kunye nezinye izinto. Kodwa ukushisa okwenyaniso kunokulinganiswa kusasa emva kokuvuswa, xa umzimba wonke uphumle kwaye awubonakali kwizinto zangaphandle. Ngenxa yoko kuthiwa yi-basal, oko kukuthi. ezisiseko, ezisisiseko.
Xa ulinganisa ubushushu, qaphela le mithetho elandelayo:
Ukulinganiswa kokushisa akukwenziwa ngexesha lokutywala utywala, ukukhulelwa komlomo, izidakamizwa, iziyobisi ze-hormonal.
Ukushisa kwe-Basal kulinganiswa kuphela kwi-rectum.
Ukulinganisa iqondo lokushisa kangcono emva kweeyure ezintlanu okanye ezintandathu zokulala, ngosuku lokuqala lomjikelezo.
Emva kokuvuswa rhoqo kusasa xa ulinganisa ukushisa okusemgangathweni, musa ukuhamba ngokukhawuleza, ungaphumi ebhedini. Nasiphi na isenzo siya kuphazamisa umphumo. Ngaphandle kokuhlwa, kufuneka upheke i-thermometer, udibanise izibonakaliso zokugqibela uze uyibeke kufuphi nombhede.
Ukulinganisa ubushushu ngexesha elifanayo.
Ukuba uvuka kusasa, umzekelo, kwindlu yangasese, kufuneka ulinganise ukushisa ngaphambi kokuphakamisa.
Izikhombisi ezicacileyo ziya kuba ukuba ulala ubuncinane kwiiyure ezingama-3 kumqolo.
Ukulinganisa iqondo lokushisa nge-thermometer ye-mercury imizuzu eyi-10 okanye i-thermometer ye-elektroniki imizuzwana engama-60, ngalinye ixesha lokushisa kufuneka libe lifanayo.
Kukhuselekile ukusebenzisa i-thermometer ye-elektroniki.
Ukuthatha i-thermometer ye-mercury, kufuneka uyenze ngasentla, kwaye kungekhona nge-mercury, ukuphepha iimpazamo ngenxa yoko.
Zonke izikhombisi zibhalwe kwidayari, ityati yokushisa isetyenziswe, kuya kuboniswa izizathu eziza kuphazamisa utshintsho lokushisa-ukusebenza ngokugqithiseleyo, uxinzelelo, ubanda kunye nabanye.
Ukuzimisela kokukhulelwa ngeqondo lokushisa
Ukuba uhlala ulinganisa ubushushu, unokwazi ukukhulelwa okwenzekile. Kunokwenzeka ukuba ukukhulelwa kwenzeka xa:
Ukushisa okuphezulu kuhlala iintsuku ezintathu kwixesha elide kunokuba emva kwe-ovulation (isigaba somzimba ophuzi), xa kushushu ukushisa okuphezulu.
Xa isigaba somzimba ophuzi sihlala kwiintsuku ezingaphezu kwe-18, uya kubona 18 amaqondo aphezulu okushisa ngokulandelana.
Ukuba ukukhulelwa kuyinto eqhelekileyo, iqondo lokushisa liza kuphakama kuma-37.1-37.3 degrees malunga neenyanga ezine, ize iyancipha. Emva kweeveki ezingama-20, akukho nantoni yokulinganisa ukushisa.
Ukuba ukukhulelwa kuye kwenzekile, kunengqiqo ukulinganisa iqondo lokushisa ukuya kwiinyanga ezi-4, kuba ukuba ngexesha lokushisa izinga lokushisa lihla, ke kukho ingozi yokuyeka ukukhula komntwana okanye isongelo sokukhulelwa kwesisu, kufuneka uqhagamshelane nodokotela ngokukhawuleza. Xa ubushushu buya ku-37.8, ke kukho inkqubo yokuvuvukala.
Ukuxhamla kwabesetyhini: Ukukhulelwa nokuzala
Iingcamango ezintle malunga neengozi zokutshaya
Isiqwenga sokulala. Yintoni intombazana ephupha ngayo?
Iyintoni i-autism yomntwana yokubonakaliswa kwayo
Indlela yokukrazula iintlekele nezifo kwizityalo zendlu?